Dhaca Guddoomiyaha Bankiga Horumarinta Soomaaliya Afrax | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Dhaca Guddoomiyaha Bankiga Horumarinta Soomaaliya Afrax
Dhaca Guddoomiyaha Bankiga Horumarinta Soomaaliya Afrax
Warar xog ogaal ah oo websiate-ka xaqiiqa.com heshay ayaa sheegaya in mas’uuliyiin ka mid ah kana tirsan maamulka Xukuumadda Soomaaliya ay layaaban yihiin lacagaha uu bilkasta lunsado mid ka mid ah raga ka howlgalo Bankiga horumarinta Soomaaliya.
Masuulkaas oo lagu magacaabo Cabdulaahi Afrax isla markaana ku magacaaban guddoomiyaha bankiga horumarinta Soomaaliya ayaana la ogeyn xiliga sida sharciga ah loogu magacaabay xilkaas, iyo in ay waafaqsantahay magacaaabistiisa sharciga.
Wararka ayaa sheegaya in Cabdulaahi Afrax lacagaha xukuumadda Soomaaliya soo gala bilkasta laga siiyo boqolkiiba hal si uu ugu dhiso bankiga dhexe oo magac ahaan kaliya hadda u jira,
waxaana xaqiiqa.com loo xaqiijiyey in ugu yaraan Afrax bishii uu helo kaligiis lacag gaareysa 70 kun oo doolarka Mareykanka ah, Mana jirto cid laxisaabtanta Afrax maadaama qaraabo dhaw ay yihiin Madaxweynaha Soomaaliya. waxaana la isweydiinayaa in madaxweynuhu arintaasi ogyahay iyo inkale?
Afrax, waxaa uu ka shaqeyn jirey bankigii Soomaaliya xiligii burburka ka hor hasayeeshee wuxuu ka mid ahaa saraakiil laga ceeriyey shaqada musuqmaasuq dartiis.
Saraakiisha xukuumadda soomaaliya qaar ka mid ah oo codsadeen in aan magacyadooda lasheegin ayaa ku baaqay in arintaan Afrax lagu sameeyo baaritaan rasmi ah.
Kala soco markasta websiteka xaqiiqa.com faalooyin xaqiiqa ah oo si hoose uga jiro dalka soomaliiya.
Previous articleDhagayso:- Afhayeenka Gobalka Banaadir oo Maanta xilka laga qaaday
Next articleMuuse Ganjab iyo Qaraabada Madaxweynaha oo boob kawada magaalada Muqdisho